«RESAKA KA ATAO !» -
AccueilTresaka«RESAKA KA ATAO !»
«RESAKA KA ATAO !»
14/01/2017 admintriatra Tresaka 0
Mahita angano handrebirebena sy hanakorontanana saim-bahoaka isan’andro izao ny gazety mpomba ireo mpanongam-panjakana. Nisy minisitra saika nisora-tena ho praiminisitra izany indray hono ary nikasa hanao fanambarana mivantana tao amin’ny RNM saingy voasakana mialoha. Tonga amin’ilay fitenenana manao hoe: “resaka ka atao!”. Fa angaha resa-jaza tahaka izany izy ity e! Sa efa tsy mahita tsaho hanaratsiana sy handotoana ny fitondrana intsony?
Na olona faran’izay tsy mieritreritra sy lany henatra aza ve dia ‘ndeha hanendry tena ho praiminisitra eny amin’ny radio amin’izao vanim-potoana efa mivoatra be izao! Hafa ny tamin’ny andron’ny profesora Zafy Albert sy Emmanuel Rakotovahiny, fony mbola nisantatra ny tsiron’izany mandeha 4×4 izany. Ny iray variana manao Madaraid, ny faharoa kosa manendry tena ho PM eny amin’ny fahitalavitra. Fa ireto hainoamanjery mamahan-dalitra ny mpamaky azy ireo no tena mahavariana. Inona no tombontsoan’izy ireo mamahana tsaho ireo mpamaky azy e?
Tsy fantatr’izy ireo ve hoe karazan’ny mandrora mitsilany ihany izy ireo amin’izao famahanan-dalitra ataon’izy ireo amin’ny mpamaky izao. Tsy maintsy ho fantatry ny olona ny marina ary hain’ny vahoaka ny manavaka ny vary sy ny akotry. Mety mahomby ilay famahanan-dalitra amin’ny fotoana iray fa tsy ho mandavan-taona mihitsy akory. Efa noporofoin’ny tantara io fahaizana miresaka io fa zavatra hafa mihitsy no navoakan’ny vata fandatsaham-bato teto. Vizana! Vizana tanteraka tsy nisy noraisina!
Aoka mihitsy izay ny famahanan-dalitra ny vahoaka amin’ny alalan’ny tsaho manaitra sy mampangitakitaka. Mety mahalafo gazety ireny fomba ireny fa tsy hitondra tombontsoa ho an’ny firenena sy izay manao izany fomba mamohehitra izany. Mba ny “galera” nandritra ireny fialokalofana tany amin’ny ambasadin’ny Afrika Atsimo ireny indray tantaraina amin’ny vahoaka. Horonan-tsarimihetsika mampangitakitaka mihitsy ange ireny e!
Madagasikara fisandratana : Anio no lanonana lehibe eny Iavoloha
7 febroary 2009 : Tokony hampiharina ny didim-pitsarana
Hery Rajaonarimampianina : “Manaja ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra ny Filoha”